Marxaladihii ay soo mareen ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed! W/Q Axmed Cabdi Cali | RBC Radio
Marxaladihii ay soo mareen ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed! W/Q Axmed Cabdi Cali
Posted on April 12, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
Taariikhda Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya waa mid ka mid ah Hantida ugu faca weyn oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, waa hanti ma guurto ah iyo Xasuus ku keydsan dadka garan kara qiimaha ay leedahay 12 April.
Taariikhda Xooga Dalka Soomaaliya waa arrin markasta laga hadlayo oo ay kaaga dhex muuqanaayso sharaf, karaamo, magac wanaagasan, geesinimo iyo guulo ay u soo hooyeen umadda Soomaliyeed, islamarkaana markaaad dhinaca kale ka eegto iyo sida ay yihiin ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya aad dareemeyso murug, nasiib daro ku dhacday Xooga Dalka Soomaaliya iyo Masiibo qaran oo u baahan xal deg deg ah.
Waajibaadka Xooga Dalka Soomaaliya waa inuu difaaco Dalka Soomaliyeed, kana difaaco dhinacyada Bad, Cir iyo welibo dhul kana difaaco cadow kasta oo isku daya in uu ku soo xadgubo gayiga Soomaaliya.
Xooga Dalka Soomaaliya waxaa lagu aaminay oo ay difaaci jireen calanka ummada Soomaaliyeed.
Xubin kasta oo ka tirsan Xooga Dalka Soomaaliya marka uu ku soo biiro ciidan ka waxuu ku dhaaranayaa in uu difaacayo dalkiisa una hurayo naftiisa xubin kasta oo ka mid ah Xooga Dalka Soomaaliya waxaa lagu maamuusay in uu xirto calaamad ka samaaysan calanka Soomaaliya.
Xooga Dalka Soomaaliya waxaa la aas aasay 12-kii April sanadku markuu ahaa 1960, waxa uuna ka kooban yahay ciidamada Lugta, Bada iyo welibo Cirka.
Markii ay Soomaaliya xoriyada qaadatay 1960, waxaa ogolaasho ama fasax ka heshay Qaramada Midoobay Si aay u dhisato ciidan ilaaliya xuduuda.
Waxaa ciidamadii ugu horeeyeyee Soomaliya dhisato laga kala keenay labadii qeybood ee ka xuroobay gumeystayaashi Ingriiska iyo Talyaaniga.
Taliyihii ugu horeeyey ee Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya yeesho waxuu ahaa AUN General Daa’uud Cabdulle Hirsi, ku xigeenkiisana waxa uu ahaa AUN General Maxamed Siyaad Barre.
Xooga Dalka Soomaaliya wixii waqtigaa ka dambeeyay waa la balaariyey waana la casriyeey isagoo si xad dhaaf ah u kobcaayay.
Xooga Dalka Soomaaliya wixii waqtigaa kadambeeyay waa la balaariyey waana la casriyeey isagoo si xad dhaaf ah u kobcaayay.
1976 waqtigaas oo Dowladda Soomaliya si qarsoodi ah ugu diyaar garowday dagaalkii Soomaali Galbeed waxaa Ciidamada lagu qiyaasayey in ay tiradoodu gaareysay.
23 Guuto oo ciidanka lugta ah
2 Guuto oo Komaandooska ah
9 Guuto ooTaangi ah
9 Guuto oo madaafiicda Goobta ah
4 Guuto oo ciidanka Difaaca ah
Ciidanka Cirka dayaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 dayaaradood, 24 ka mid ah waxeey ahaayeen kuwa Miiga 21
Qaaybaha ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya sida qeybta 60-aad ee magaalada Baydhabo, qeybta 21-aad ee magaalada Dhusamareeb, iyo qeybta 26-aad ee magaalada Hargeeysa.
Saldhigyada waxay kala ahaayeen 43-aad ee magaalada Kismayo, iyo 54-aad ee magaalada Garowe.
Ciidanka Bada saldhiyadiisa waxay ku yaaleen magaalooyinka Muqdisho oo Banaadir ah, Kismayo oo Jubbada Hoose ah iyo Berbera oo Waqooyi galbeed ah.
Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12-ka Bisha April sanadkan 2017 waa sanad guuradii 57-aad ee ka soo wareegta aas aaska Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya.
Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya ayaa sanadihii dambe waxay saaxiib la noqdeen daryeel la’aan, iyo xaalado adag inkastoo ay intaasi dhan heystaan weli ma joojin shaqada Qaranka iyo difaacida Dalka.
Madaxweyne walbo oo dalka hoggaamiye ka noqda waxa uu balan qaad aan afka dhaafsiisneyn u sameeyaan Ciidanka Xooga Dalka.
W/D: Axmed Cabdi Cali